तुलसी गिरीको भविश्यवाणी र कमल थापाको पतन
सिद्धार्थ थापा पशुपति समशेर राणाको नेतृत्वमा रहेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सात जना केन्द्रीय सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेको दावी गर्दै कमल थापाले नयाँ दलको रुपमा स्थापित राप्रपा प्रजातान्त्रिकको दर्ता अमान्य भएको जिकिर गरेका छन् । यसको प्रतिक्रियामा म के भन्न चाहन्छु भने– कसैले एक पटक चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम भुक्तान भइसकेपछि तत्सम्बन्धी...
सुरक्षा सरोकारको कसीमा नेपाल-भारत सम्बन्ध
राजेन्द्रसिंह भण्डारी काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकि ठिमीतिर भनेजस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हतार-हतार फेरि ठूलो दलबलका साथ नयाँदिल्लीतर्फ हान्निएका छन् । छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्ध पारस्परिक हितको मुद्दामा केन्द्रित हुनु पर्छ । त्यसका लागि भ्रमणको आदानप्रदानलाई कुटनीतिक रुपमा अत्यधिक महत्वका रुपमा लिन सकिन्छ तर भ्रमण गर्दा राष्ट्रिय स्वाभिमानका...
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रोगको महामारी देखिँदैछ, यसरी सजगता अपनाऔं
डा. शेरबहादुर पुन – विश्वमा प्राकृतिक प्रकोप पछि सधै स्वास्थ महामारी हुने गरेको देखिन्छ । र त्यसको सम्भावना उच्च हुने गर्छ । अहिले दैनिक जसो बाढी पहिरो गएका ठाउँबाट झाडापखाला, श्वासप्रश्वास र ज्वरोका बिरामी बढिरहेको भन्ने समाचार आइरहेका छन् । यसले महामारीको संकेत गर्दैछ । नेपाल सधै प्राकृतिक प्रकोपको चपेटामा पर्ने गर्छ । नेपालमा हरेक वर्ष बाढी पहिरो जाने गर्छ । तर सधै...
लोकसेवाको विज्ञापन र अन्योलको उपयोग
यदु नेपाल सम्पूर्ण शिक्षित नेपाली युवाहरुको आस्था र भरोसाको केन्द्र बनेको लोकसेवा आयोगका विज्ञापनहरु अब केही समय नहुने भन्ने चर्चाले महत्व पाएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न ‘कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४’ को मस्यौदा संसदमा पेश भए पश्चात यो विषयले महत्व पाएको हो । उक्त...
डा. सबिना भट्टराई – गर्मी याममा शरीरमा पसिना आउनु नराम्रो कुरा होइन । यसले शरीरलाई शान्त राख्न तथा शरीरको तापक्रम घटाउन मद्दत गर्छ । एक हिसाबले शरीर संरक्षणको लागि सुरक्षात्मक संयन्त्र पनि हो । पसिना आयो भने शरीरलाई शितल हुन्छ, तर धेरै पसिना आयो भने रोग लाग्छ । यसलाई हाइपर हाइड्रोसिस् भनिन्छ । पसिना आउने अवस्था धेरै गर्मी भयो भने नसाको समस्या भएको, चिन्ता...
वैकल्पिक राजनीतिः पागलहरुको ‘एन्टी थेसिस’
केशव दाहाल के डा. बाबुराम भट्टराई एक्लिएकै हुन् ? के नयाँ शक्तिका अभियन्ताहरु पागल छन् ? अन्यथा चौतर्फी प्रहारमा पनि उनीहरु कसरी शीर ठाडो राखेर हिँड्न सकेका होलान् ? यी प्रश्नहरु यो हप्ता नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक चर्चा गरिएका प्रश्नहरु हुन् । नयाँ शक्तिभित्रका पछिल्ला अन्तरसंघर्षमा रमाउनेहरु समेत यी प्रश्नसँगै व्यंगपूर्ण उत्तरहरु खोजिरहेका छन् । उनीहरु मुसक्क...
बाढी पहिरोबाट कसरी बच्ने ?
बिनोद पराजुली – बाढी र पहिरोको कारण देशभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । विशेषरी नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दाको जनजीवन कष्टकर छ । बाढीले तराईका सयौँ घर डुबानमा परेका छन् । पहाडमा पहिरोले धेरैको ज्यान गएको छ । कति बेपत्ता भए भन्ने यकिन छैन । पानी पर्ने क्रम नरोकिएकाले अझै बाढी पहिरोको खतरा छ । बाढी पहिरोको बेला के कुरामा ध्यान दिने त ? बाढीबाट जोगिन नदी तटीय क्षेत्रमा...
धनबहादुर पुरी पूर्वको उदाउँदो शहर इटहरी शुक्रबार रातिदेखि बसीनसक्नु छ । यहाँका हाइवे सडकहरुमा सहजै हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्था छैन । बाढीकै कारण यहाँ नेपाल टेलिकमको फोन अवरुद्ध छ । अधिकांश वडाहरु जलमग्न छन् । पक्की घरहरु समेत आधाउधी डुबेका छन् । रोकिएर राखेका सवारी साधन डुबेका छन् । घरमा सुतेका ६ जनालाई बाढीले बगाएको छ । इटहरीमा ०५३ सालपछिको सबैभन्दा ठूलो बाढी आएको...
राजपा प्रदेश २ को चुनावमा सहभागी होला कि बहिस्कार गर्ला ?
राजकुमार श्रेष्ठ बबरमहलस्थित मुख्यालयमा बसेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित ४३ जनाले आगामी २ असोजमा हुने प्रदेश २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बिचार राखे । २९ पदाधिकारी भने संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म सहभागी हुन नहुने पक्षमा उभिए । १९ जना तटस्थ रहे भने ४३ पदाधिकारी बैठकमा उपस्थित नै छैनन् । सोही कारण उनीहरुको ‘पोजिसन’...
एमालेबिरुद्ध सम्भावित ‘महागठबन्धन’ स्टन्ट कि आवश्यकता ?
मात्रिका पाैडेल साउन २० गते भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १९ मा हुने पुनः मतदानमा यसअघि असन्तुष्टि जनाएर भोट नहाल्ने कांग्रेसजनले पनि अब माओवादी उम्मेदवार रेणु दाहाललाई लाइन लागेर णा कांग्रेस जिल्ला सभापति जीतनारायण श्रेष्ठले गरे । एमालेले जित्यो भने आउँदा चुनावमा कांग्रेसले चितवनमा जित्न नसक्ने भएकाले कसैगरी एमाले हराउनुपर्ने बाध्यता उनले सुनाएका...
बहस: यसरी गरौं निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको बहसमा एउटा क्षोर छ, नयाँ संविधान लेखेपनि पुरानै ०४७ को संविधानले जसरी नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यो ठाउँ हामीले छोडिसक्यौं । त्यसबेला केन्द्र पछाडिको युनिट जिल्ला थियो, अहिले प्रदेश छ । त्यसैले प्रदेशमा नपुग्दासम्म जिल्लामा पुग्न सकिँदैन, संविधानमा प्रष्ट भाषामा भनिएको छ । दोस्रो क्षोर छ, जसले...
दीपक बोहोरा हिजोआज जताततै राजधानीका सडकका खाल्डाहरुको मात्र चर्चा छ । त्यसो त धेरै पहिलादेखि नैं राजधानीको सडकमा खाल्डाहरु थिए नै तर त्यसमा कसैको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन । विद्यालयबाट फर्किंदै गर्दा ढलमा परेर काठमाडौं मनमैजुकी ७ वर्षीया विनिता फुयालको अनाहकमा ज्यान गयो भने ढलमा बगेर पनि कक्षा ९ मा अध्ययनरत सत्या सापकोटा भाग्यले बाँचिन् । यी दुई प्रतिनिधि घटना...
घरमा दुहुना नभए पनि थालभरी खिर !
मिलन तिमिल्सिना – बल्लतल्ल मकैले चमरा काढ्यो, सुत्ला पनि च्याप्यो । अनि असारको मध्यतिरबाट हामी केटाकेटी गुनगुनाउन थाल्थ्यौं– ‘असारमा खाने दुधिला मकै साउनमा खाने खिर...!’ सुन्दैमा मुख मीठो हुने । दुधिलाभन्दा भरिला मकै नै टन्न पाइने भएकाले असारमा यो उक्तिको त्यति वास्ता भएन । तर साउनमा त दुधिला मकै होइन, दुधै दूधको खिर खाने सिजन ।साउने संक्रान्तिमा लुतो फाल्ने रमझमले...
शेष घले सर्वप्रथम बिभिन्न मुलुकबाट यो सम्मेलनमा सहभागी हुन आफ्नो समय र स्रोत खर्चिएर यहाँ पाल्नुभएका सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली साथीहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहान्छु । दुई दिनसम्म चल्ने यो बैठकमा युरोपका गैरआवासीय नेपालीहरुका स्थानीय मुद्दा तथा सरोकारका बिषयमा गहन छलफल हुने छ । सँगै आठौं युरोपेली महिला सम्मेलन पनि रहेकाले युरोपेली नेपाली महिला शसक्तिकरणका...
सुजता गोले तामाङ - मलाई सानै उमेरदेखि समाज सेवा गर्ने मन थियो । मेरो ममी बितेको एक वर्ष मात्रै भयो । ममीले सुसाइड गरेपछि मानसिक रुपमा विक्षिप्त भएकी थिएँ । ममीको मृत्युपछि म १७ दिनसम्म मेन्टल अस्पताल बसेँ । काठमाडौं आएको एक वर्ष मात्रै भयो । कक्षा आठसम्म दोलखामै पढेकी हुँ । घरमा दुःखद घटना घटेपछि बुवाले मलाई पढ्नका लागि काठमाडौं ल्याउनुभयो । म घरमा हुँदा पनि अरुको दुःख...